Degmada Bräcke waxeey ku taala dhexbarta Iswiidhan, gudaha gobolka Jämtland. Degmada waxaa degan ku dhawaad 6500 oo qof. Degmada Bräcke waa degmad duwanaansho leh, buuro dhaadheer, waadiyaal iyo wabiyaal yar qurux badan oo leh malaay. Degmaada Bräcke waxeey lee dahay baadiye cagaaran oo qani ka ah wax soo saarka ganacsiga iyo hoowlaha firfiircoonida ee dibada iyo jawi shirkadeed. Dabiicada ayaa soo jiidato dadka inta badan oo soo booqdo degmada Bräcke, howlaha firfircoonida ee dibadana qeeyb ayee ku lee dahay dalxiiska iyo dadka meesha degan. Baraf-raaca, baraf-raaco kobaha, jid socodka, ugaadhisiga, miro iyo waarig gurida waa in ka mid ah howlaha ee dabiicada degmada soo bandhigeeyso.
Guriyaal kala duwan oo laga kireeysan karo ayaa ka jiro degmada Bräcke. Laga bilaabaa guri hal qol iyo jiko leh ilaa guri ka weeyn oo afar qol iyo jiko leh. Kuwaan waxee uu kala qeeybsan yihiin Bräcke, Gällö, Pilgrimsstad iyo Kälarne. Heerka kirada waxuu ka bilaawmaa ku dhawaad 2 900 oo karoon bishii guriga yar ilaa 6 000 oo karoon bishii gurig weeyn oo afar qol iyo jiko leh. Haddii aad rabto in aad gurigaada qiimaha wax badan ayuu ka hooseeyaa magooliyinka waa weeyn.
Luuqadaha hore oo ka jiro marka la iska dhaafo iswiidhiska waa ingriis, carabi, tigrinya iyo af soomaali.
Sido kale Bräcke waxaa laga hela xarun-caafimaadeed, rugta caafimaadka ee caruurta iyo dhakhtarka ilkaha. Isbitaalka gobolka waxuu ku yaala Östersund. Meesha dhismaha iska heeysto ee Bräcke waxaad soo bandhig sahlan ee xagga dukaamada. Waxaa halkaas ku yaalo oo ka mid ah dukaamo cunto, banki, dukaamo-ubax, dukaamo isboorti iyo howlaha firaaqada iyo ganacsiga birta iyo midabyada. Sido kale degmada waxaa lee deehay ururo uu firfircoon howlaha dibada, waxaa ka mid ah ururo isboorti, Laanta cas oo leh dukaan gacan labaadle ah, Ururka badbaadinta caruurta (Rädda Barnen) , ABF iyo ururo diimeed ee kala duwan. Kaniisadooyin iswiidhisheed waxeey ku yaala tuulooyinka badankood. Ururka diineed ee Baatis iyo kanisada yar ee Elim waa ku yaalaan Bräcke. Gudaha Östersund, oo ku dhawaad hal saac oo baabur uu jirto Bräcke, waxaa sido kale ku yaal masaajid. Sido kale Östersund waxaa ku yaal dukaamo sii waa weeyn.
Daryeelka carurta ee degmada Bräcke si fiican ayuu ugu dhisan yahay caruurta uu dhaxeeyo 1 iyo 5 sano, ayadoo leh xanaano 1-5 jir iyo iskaashiga-waalidiinta. Degmada gudaheed waxaa ku yaalo shal xanaano ee degmada maamusho iyo sadax nuuc ee ah iskaashiga-waalidiinta. Dugsi xanaaneedka ee degmada waa: Xanaanada Fjällsta, Xanaanada Galaxens (Gällö), Xanaanada Pilgrimens (Pilgrimstad), Xanaanada Trollskogens iyo Xanaanada Ånäsets (Kälarne). Iskaashiga-waalidiinta waa: Busbua i Rissna, Lek och Bus i Kälarne, och Hyllan i Sörbygden.
Dugsi hoose-dhexe waajib ayuu waxaana loogu tala galay ardayda uu dhaxeeyso 7 ilaa 16 sano. Dugsiyadeena waa kuwo howshoodu markasta horay uu socoto oo difiicaayo in mustaqbal-shuradeed oo fiican loo sameeyo ardayda aqoontooda iyo hormarka bulshadeed. Degmada Bräcke waxaa ku yaalo 5 dugsi hoose-dhexe, Bräcke, Gällö, Kälarne, Fjällsta och Pilgrimstad. Dugsiga sare ee Jämtland ee Bräcke waxuu ku jiraa ururuka dugsiga sare ee Jämtland, waxuuna soo bandhiga waxbarashada korontada, barnaamijka tamarka iyo barnaamijka farsamo gacmeedka.
Waxaad wici kartaa oo la hadli karta shaqaale xafiiska shaqada, af carabi telefoonka waa: 0771-86 01 01, af soomaali telefoonka waa: 0771-86 01 03, af tigrinja, telefoonka waa: 0771-86 01 04.
Degmada Bräcke waxeey ku agtaalaa E 14 laakin wadada kuma dhextaalo. Ku dhawaad hal saac oo baabuur ahaan uu jirtaa Östersund, hal saac iyo barna Sundsvall, shan saacna Stockholm. Gaadiid tareen iyo bas maalin kasto ayaa loo heelaa magaalooyinka ka waa weeyn ee Östersund, Sundsvall, Umeå iyo Stockholm. Dadka ka shaqeeyo Östersund fursad ee tareen maalinkasto ugu tagaan waa helayaan. 40 daqiiqo oo tareen ayuu safarka qaataa. Gaadiidka-Gobolka Z waxee ku howl lee yihiin baska, adeega gaadidka-gaarka ah iyo gaadidka wicida-xakunto, SJ iyo Norrtåg waxeey ku howl lee yihiin tateenka.
Bräcke waxaa ku yaalo shirkadooyin yaryar oo tiro badan, asaaskuna waa shaqada geedka iyo biraha. Dad badan oo joogo degmada waxeey masruufkooda ka helaan warshadeeynta-geedaha, ayadoo la jaraayo, warshada-alxamid iyo si warshadeeynaayo alaabta geedaha laga sameeyo. Sido kale degmada waxaa lagu yaqaan in ee lee dahay farshaxan yaqaan ee dhinaca cuntatada. Sanadooyinka dhaw ee soo socdo waxaa si weeyn loogu baahnaa doonaa kabaryeeri, cunto kariye, dhakhtar, macalinka dugsiga xanaanada, tumaal iyo koronto-yaqaan gudaha Bräcke iyo degmooyinka uu dhow. Waxaa jiro doono fursado lagu helo shaqo dhinaca daryeel iyo xanaaneeynta, warshadeeynta-geedaha, alxameeynta iyo howl-geeraash iyo gadiidka. Xafiiska shaqada waxuu kuu soo bandhigi karaa waxbarasho badan iyo howlo ku diyaarinaayo shaqo lagu tagi karo tareen. Taasi waxeey kor uu qaadi kartaa fursadaada ee dhanka helida shaqada. Waxeey tusaale ahaan ku saabsan tahay waxbarasho dhanka daryeelka iyo xanaanada. Alxanka, ka shaqeeynta tumaaleed, darawal-shaqadeed, shaqo-bakhaar, farsamo howl garaash, shaqo maqaayad, iibin iyo adeega macmiilka. Warbixin dheeraad ah waxaa laga helaa Xafiiska shaqada.
Socionom / Socialsekreterare Socionom
Socionom / Socialsekreterare , vik Socionom
Chef för renhållningsverksamheten Kontorschef, offentlig förvaltning
Lärare i moderna språk , tyska , till Gällö skola Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsterapeut till kommunens rehabteam Arbetsterapeut
Elevassistent till Bräcke skola Elevassistent
Yrkeslärare / instruktör till Bygg - och anläggningsprogrammet Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Sjuksköterska till Kälarne (Resursen). Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska till Resursen , vik Sjuksköterska, grundutbildad
Distriktssköterskor / Sjuksköterskor Sjuksköterska, grundutbildad
Distriktsläkare till Kälarne hälsocentral Specialistläkare
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB söker HR medarbetare HR-specialist/HR-adviser
Samordnare till Fordonsenheten / Verkstad Transportsamordnare
Lediga jobb inom kundservice på Webhelp i Östersund! Kundtjänstmedarbetare
Säljande kundtjänstmedarbetare till Viasat Kundtjänstmedarbetare
3 849 km2
Östersund 67 km
Stockholm 480 km